nb insurance(nb insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मजबुत बन्दै एनबी इन्स्योरेन्स: नाफा, बिमा र जगेडाकोषमा छलाङै छलाङ
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्सले चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको कमालको प्रगति गरेको छ । यो कम्पनीले खूद नाफामा एकसयभन्दा बढी प्रतिशतले प्रगति गर्दै २ करोड ५५ लाख कमाएको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो नाफा १ करोड २० लाखमा सीमित थियो । समीक्षा अवधिमा एनबी इन्स्योरेन्सले बिमा शुल्कबाट ८ करोड ९९ लाख आर्जन गरेको छ । अघिल्लो...
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले असिस्टेण्ट जनरल म्यानेजरदेखि असिस्टेण्टसम्मका पदमा दर्जनौ कर्मचारी मागेको छ । यो कम्पनीले सोमबार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारी मागेको हो । यो बिमा कम्पनीले मुख्य कार्यालयमा मार्केटिङ विभाग हेर्ने गरी एकजना असिस्टेण्ट जनरल म्यानेजर एकजना, सोही...
काठमाण्डौ । नवील बैंक लिमीटेड र २ बिमा कम्पनीले मंगलबार(असोज १० गते) वार्षिक साधारणसभा गर्दैछन् । नबील बैंकले आजको साधारणसभाबाट बोनस सेयर र नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गरी दशैंको अवसरमा लगानीकर्तालाई खुशी बनाउँदैछ भने नेको इन्स्योरेन्सले बोनस सेयर र हकप्रद तथा एनबी इन्स्योरेन्सले हकप्रद निश्कासनको प्रस्ताव पारित गर्दैछन् । नबील...
भोलिदेखि १२०० बढीको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर खुल्दै
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा अन्तिम बिक्री मूल्य १२७५ रुपैयाँ रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडको सेयर बोलकबोलबाट सस्तोमै उठाउने अवसर भोलि(भदौ १५ गते)देखि खुल्दैछ । एनबी इन्स्योरेन्सले बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको २८ हजार ५ सय ८० कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्रीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यो...
१२९० रुपैयाँको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा अन्तिम बिक्री मूल्य १२९० रुपैयाँ रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडको सेयर बोलकबोलबाट सस्तोमै उठाउने अवसर खुल्ने भएको छ । एनबी इन्स्योरेन्सले बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको २८ हजार ५ सय ८० कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्रीका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । यो कम्पनीले असार...
एनबी इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई हकप्रदको ठूलो भारी बोकाउने !
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई हकप्रदको ठूलो भारी बोकाउने गरी पूँजीवृद्धि योजना(क्यापिटल प्लान) बिमा समिति र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बुुझाएको छ । यो बिमा कम्पनीले बिमा समितिले तोकेको १ अर्ब पूँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको हो । कम्पनीको योजना अनुसार २ पटक गरी सेयरधनीले हकप्रदको निकै ठूलो भारी बोक्नुुपर्नेछ...
असार ५ देखि एनबी इन्स्योरेन्सको हकप्रद, जेठ ४ मा बुक क्लोज
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्सले आगामी असार ५ गतेदेखि आफ्ना सेयरधनीका लागि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । बिहीबार यो कम्पनीले एक सूचना प्रकाशित गर्दै असार ५ गतेदेखि हकप्रदको बिक्री खुल्ला हुने र सेयरधनीले साउन ९ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने बताएको हो । एनबी इन्स्योरेन्सले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल २७...
१८ सय बढीको बिमा कम्पनीको सेयर १ सयमै पाउने अवसर !
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्सले निश्कासन गर्न लागेको १ बराबर १ अनुपातको हकप्रदका लागि बुक क्लोजको मिति आगामी जेठ ४ लाई तोकेको छ । यो बिमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले एकसाताअघि सतप्रतिशत हकप्रद निश्कासनको अनुमति दिएको थियो । यो कम्पनीले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गरी जेठ ४ गतेलाई बुक क्लोज मिति तोकेको हो । यसको अर्थ जेठ ३ गतेसम्म एनबी...
एनबी इन्स्योरेन्सको २७ लाख कित्ता हकप्रद आउँदै
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले एनी इन्स्योरेन्सलाई उसले प्रस्ताव गरेको सतप्रतिशत सेयर निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ । यो स्वीकृतिसँगै अब एनबी इन्स्योरेन्सले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल २७ लाख कित्ता हकप्रद सेयर आफ्ना सेयरधनीलाई बिक्री गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमीटेड यो बिमा कम्पनीको हकप्रद निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक...
एनबी इन्स्योरेन्सले कमालै गर्यो, नाफामा १३७ प्रतिशत र प्रिमियममा ५ गुणाको वृद्धि
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्सले चालुु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खूद नाफातर्फ १३७.२६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरी सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएको छ । यो कम्पनीले आइतबार प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमासमा १ करोड ३१ लाखमा सीमित खूद नाफा यो वर्ष बढेर ३ करोड १२ लाख...
एनबी इन्स्योरेन्सले सतप्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्सले एकसयप्रति हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनी हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुुगेको हो । सन् २०१६ डिसेम्बर ४ मा सम्पन्न एनबी इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभाले १ बराबर १ को अनुपातमा(१०० प्रतिशत) हकप्रद निश्कासनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डका अनुसार एनबी...
एनबी इन्स्योेरेन्सले सतप्रतिशत हकप्रद निश्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले चुक्तापूँजी बढाउने उद्देश्यले सेयरधनीहरुलाई १ बराबर १ अर्थात सत्प्रतिशत हकप्रद दिने घोषणा गरेको छ । कात्तिक २६ गते बसेको कम्पनीको बोर्ड बैठकले आफ्ना सेयरधनीलाई एकसय प्रतिशत हकप्रद दिने निर्णय गरेको शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रकाशित एक सूचनामा जनाइएको छ । यो निर्णय नियामक...